Dowladda oo xabsiga dhigtay Ciidamo & Saraakiil lacago baad ah qaadayay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dowladda oo xabsiga dhigtay Ciidamo & Saraakiil lacago baad ah qaadayay
Afhayeenka Ciidamada Booliska Soomaaliyeed Dhame Sadiiq Adan Cali ayaa sheegay in Booliska Soomaaliya ay ka jawaabeen cabasho ka timid Shacabka ku nool Gobolkan Banaadir,kaas oo ay ka qabeen qaar kamid ah Ciidamada Dowladda.
Shir Jaraa’id oo uu Warbaahinta ugu qabtay Muqdisho ayuu Afhayeenka sheegay in baaris dheer ay Ciidamada Booliska Soomaaliyeed xabsiga dhigeen Ciidamo ka howlgalayay mid kamid ah baraha Koontorool ee Magaalada muqdisho,kuwaas oo uu sheegay in ay dadka Shacabka ah ka qaadayeen lacago laaluush ah.
Ciidamada la xiray ayuu sheegay inay tallaabada ay laaluushka ku qaadanayeen ay dhacday xilligii lagu guda jiray bandowga Habeenkii ay dowladda Soomaaliya saartay Magaalada muqdisho walow dadka Muqdisho si iskood ah bandowga isaga qaadeen.
Ciidamada qaar ee dowladda ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa mararka qaar waxaa ay lacago jidmar ah ka qaadaan gaadiidka iyo mootooyinka bajaajta wada,xilliyada ay socdaan howlgallada ama ay wadooyinka xiran yihiin.
Dowladda oo xabsiga dhigtay Ciidamo & Saraakiil lacago baad ah qaadayay was last modified: June 8th, 2020 by Admin